Home Wararka Gudaha Ciidamo gadoodsan oo la wareegay kastamka canshuuraha GURICEEL
Ciidamo gadoodsan oo la wareegay kastamka canshuuraha GURICEEL
Xaaladda magaalada Guriceel ee gobolka Galgaduud ayaa maanta aad u kacsan, waxaana lagu arkayaa ciidamo ka tirsan kuwa Daraawiishta Galmudug oo gadood ah, sida ay xaqiijiyeen ilo wareedyo lagu kalsoon yahay.
Ciidamadan oo saldhig ku lahaa duleedka Guriceel ayaa lagu soo warramayaa inay isku fidiyeen qaybo badan oo ka mid ah magaaladaasi, iyaga oo la wareegeen kastamka canshuuraha dowlad goboleedka Galmudug ee ku yaalla halkaasi.
Sidoo kale waxa ay hakiyeen ciidamadu dhaq-dhaqaaqa wadadaas, gaar ahaan qaybta xigta dhinaca degmada Matabaan ee gobolka Hiiraan.
Wararka ayaa sidoo kale sheegaya in ciidamadu ay ka cabanayaan mushaar la’aan, waxayna saraakiishoodu sheegeen inysan wax mushaar ah helin bihii lasoo dhaafay.
Arrintan ayaa saameyn ku yeelatay dhaq-dhaqaaqa gaadiidka isaga kala goosha wadadaas, waxaana lagu soo warramayaa in baabuur fara badan ay ku xayiran yihiin kastamkaasi oo ay Galmudug ku leedahay magaalada Guriceel, isla-markaana lagu qaado canshuuraha.
Xaaladda ayaa haatan aad u kacsan, ma jiro weli wax hadal ah oo kasoo baxay saraakiisha ciidamada Galmudug iyo madaxda ugu sarreysa ee maamulkaasi.
Inta badan ciidamada Galmudug ayaa cawda mushaar la’aan, waxayna taasi keentay in ay marar badan gadood ka sameeyeen magaalooyinka waa weyn ee maamulkaasi.
Previous articleMuxuu Sheikh Zayed u ballan-qaaday Xasan Sheekh?
Next articleShirka Golaha Wasiirada Jubbaland oo lagu qabtay meel ka baxsan Kismaayo iyo arrin lagu ansixiyay
Qorshaha 3 geesoodka ah ee madaxweyne Xasan Sheekh oo la sharxay
Dowladda Hirshabelle oo magaacaabi rabto wasiiro cussub Maalmaha soo aaddan .